21 Sep 2018 . 5:38 PM
Apple MacBook တွေက ဈေးကြီးပြီး အရည်သွေးပိုင်း စိတ်ချထားလို့ရတယ်၊ ဟိတ်ဟန် အပြည့်ရှိတယ်။ လက်တော့တလုံးမှာ ရှိသင့်တဲ့ Standard အားလုံး ပိုင်ဆိုင်နေတယ်။ နောက်ပြီး macOS ဆိုတာက အရေးကြီးဆုံး အစိတ်ပိုင်းလို့တောင် အမွှမ်းတင်ချင် တင်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဈေးနှုန်းချင်းတူနေရင်တောင် စွာတေးလန် Windows Laptop တွေကို ဘာလို့ မယှဉ်နိုင်တာလဲ? ဒီလို ကောင်းကောင်းကမ်းကမ်း သုံးချင်လို့ MacBook ကို ဈေးကြီးပေး ဝယ်ထားလိုက်တာတောင် သူမပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ Windows အားသာချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ?
Razer is Mac on Windows [Legend]
Windows Laptop တွေ ပိုဈေးသက်သာတယ်
ပထမဦးဆုံး MacBook နဲ့ Windows PC ဈေးနှုန်းချင်း ကွာနေတာက ကုမ္ပဏီတန်ဖိုး Apple ပိုမြင့်နေလို့ပါ ။ အခုချိန်မှာ တစ်ထောင်ဘီလီယံ (တစ်ထရီလီယံ) တန်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ဘယ် Apple Product မဆို ဈေးပိုတက်သွားပြီပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်မလို့ ဈေးအနည်းဆုံး Mac Mini တောင် ဒေါ်လာ ၅၀၀ လောက်ရှိတယ်၊ ဒီတန်ဖိုးနဲ့ ပေးရတဲ့ Mac Mini စွမ်းဆောင်ရည်က ဒေါ်လာ ၃၀၀ တန် Windows ကွန်ပျူတာ နဲ့ အတူတူပဲမလို့ Specification တူနေရင် ဘာလို့ Mac Mini ကို ရွေးမှာလဲ?
Impressive Mac Rivalry Dell XPS
ဒီလိုပဲ Apple လက်တော့တွေထဲ လှမ်းရှိုးကြည့်လိုက်ပါ၊ ဈေးအနည်းဆုံး MacBook Air ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ စရောင်းတာမလို့ တကယ့်ဘုရားစူး Price ပါ။ ဒီလို Basic Model ကိုမှ Budget သုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ပဲရှိတာမလို့ MacBook Air Specification အတိုင်း Windows မှာ သွားဝယ်ရင် ဒေါ်လာ ၄၀၀ လောက်နဲ့ရနိုင်တယ်၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ Windows PC ဆိုရင် ဘယ်လောက်စွာနေမလဲ တွေးကြည့်လို့ရပါတယ်။
Windows PC မှာ ရွေးချယ်လို့ရတာ အများကြီးပဲ
လက်တော့ တလုံးအပြေးဝယ်တဲ့အခါ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ အနေထားလိုက် Windows မှာ ရွေးချယ်လို့ရတာ အများကြီးပါ။ ဂိမ်းကစားဖို့လား၊ ရုံးသုံးအတွက်လား၊ ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ချင်လို့လား? အိုကေဗျာ…အစုံရှိတယ်၊ Size စုံ၊ Brand မျိုးစုံနဲ့ ဘယ် Windows လက်တော့ကြိုက်လဲဆိုပြီး စိန်ပြေနေပြေ ရွေးနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် MacBook ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ ဒီတံခါးကပဲဝင်၊ ဒီတံခါးကပဲပြန်ထွက် လို့ပဲပြောရမှာပါ။ ဘာလို့လဲ? သူ့မှာ ရွေးချယ်စရာ Air ရယ်၊ MacBook Pro ရယ် New MacBook ရယ် ဆိုပြီး သုံးမျိုးပဲရှိလို့၊ ဒါတောင် Pro တမျိုးပဲ Editing အတွက် Strong ဖြစ်တာ၊ သူ့မှာ Dedicated GPU နဲ့ Core i9 CPU ပါလို့။
MacBook Pro without Touchbar
Windows PC တွေ ကြိုက်သလို Upgrade လုပ်နိုင်တယ်
ဒီအချက်ကို Mac တွေ လုံးဝမလိုက်နိုင်ပါဘူး၊ ဒီ CPU ဒီ RAM ဒီ SSD နဲ့ ကြောငြာထားတဲ့ မော်ဒယ်အတိုင်း ဝယ်ပြီးသွားရင်တော့ ဒီခရီး၊ ဒီမှာတင် ဆက်မသွားတော့ဘူးလို့ မှတ်လိုက်ပါ။ ဘာ Upgrade မှ မလုပ်နိုင်သလို မနိုင်ဝန်လည်း ထမ်းခိုင်းလို့မရပါဘူး။ ဒီထက် ပိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက Windows PC တွေ ကြိုက်သလို Upgrade လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် Hackintosh ကွန်ပျူတာဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာ macOS တင် Windows Hardware တွေနဲ့ တင်သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
Choice is very Limited
Gaming at 4K? Sorry for Mac Users
ကွန်ပျူတာနဲ့ ဂိမ်းကစားဖို့ တွေးထားရင် MacBook ဝယ်ဖို့ မစဉ်းစားလိုက်ပါနဲ့၊ ဘာလို့လဲ? ငါ့မှာလည်း Windows လို Specs တွေ ပါတယ်လေး၊ Retina Display နဲ့ မကစားချင်ဘူးလားဆိုပြီး သံယောင်နားမထောင်လိုက်ပါနဲ့။ Mac တွေ ဘယ်လောက်ပဲ Powerful ဖြစ်တယ်ပြောပြော သူ့ OS ဒီဇိုင်းနဲ့ Cooling Efficiency ကိုက ဂိမ်းကစားဖို့အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး 144Hz Screen ၊ Nvidia GPU နဲ့ Gaming Keyboard လို အရေးပါတဲ့ အစိတ်ပိုင်းတွေ ပါမလာတဲ့အတွက် Gaming Laptop ကြီးနဲ့ အလုပ်လုပ်မလား၊ ဂိမ်းဆော့မလား စိတ်ကြိုက်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
Gaming with Mac is Possible?
Windows Laptop တွေမှာ Port တွေ ပိုပါတယ်
Apple ကို Ditch King (ဖြုတ်ထုတ်ဘုရင်) လို့ နာမည်ပေးလိုက်တာ ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ MacBook Air မှာ DVD Drive စဖြုတ်တယ်၊ 2016 MacBook တွေက စပြီး USB-2.0 Port တွေ၊ 3.0 Port တွေ၊ HDMI Port တွေဆိုပြီး ရှိရှိသမျှအပေါက်တွေ အကုန်ဖြုတ်ပစ်တယ်။ ထွက်လာတယ် မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး C Port တခုထဲနဲ့ ၊ အဲ့တော့ Dongle သပ်သပ်ဝယ်သုံးရတယ်၊
More Ports on Windows PC
Mac User တွေကြည့်လိုက် Adapter မျိုးစုံနဲ့ အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာပဲ။ TV ၊ Projector ချိတ်ဖို့ Connector သပ်သပ်၊ အားသွင်းကြိုးသပ်သပ်နဲ့၊ သူတို့ကိုကြည့်ရ မျက်စိ နောက်နေတာဆိုတော့ တစုထဲဖြစ်သွားအောင် ThunderBolt Port ဆိုပြီး ထပ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ဒါလည်း ဂွပ်ကျနေတုန်းပဲ၊ Windows Laptop အများစုမှာ USB Port မျိုးစုံ၊ HDMI Port တွေနဲ့ Card Reader တောင် အဆစ်ပါနေသေးတာမလို့ ဘာလာလာ Ready ပါပဲ။
Even Razer offers Maintainable Parts
Windows hardware တွေက အမြဲလိုလို Update ဖြစ်နေတယ်
အနီးစပ်ဆုံး MacBook Air ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီပုံစံ၊ ဒီတိုင်းကြီးနဲ့ ဘယ်တော့မှလည်း Upgrade ဖြစ်မလာဘူး။ Display ကလည်း ဝွဲစွဲနေပြီ၊ Full HD Resolution လည်း မရဘူး၊ နောက်ပြီး Entry Level တောင်မှ ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်နေမှ Update လုပ်ပေးတာဆိုတော့ Hardware အသစ်ထွက်တိုင်း Specification မျိုးစုံ၊ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ ပိုပို Powerful ဖြစ်လာတဲ့ Windows Laptop ကို ယှဉ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ
CPU & GPU Stickers
Productivity Software တွေ Windows နဲ့ ပိုအလုပ်လုပ်တယ်
Productivity Software ဆိုလို့ Microsoft Office ကိုပဲ ပြေးမြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သူ့ကို Windows နဲ့ macOS နှစ်မျိုးလုံးမှာ သုံးနိုင်တယ်ဆိုမယ့် Feature ပိုစုံတယ်၊ Update ပိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို Windows မှာပဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ Mac တွေထက် သုံးရပိုအစဉ်ပြေသလို Software အများစု Windows နဲ့သုံးရတာ ပို Stable ဖြစ်ပါတယ်။
Softwares run great on Windows PCs
Windows OS ကို ကြိုက်သလို Customize လုပ်နိုင်တယ်
OS Stability နဲ့ ပို Secure ဖြစ်တဲ့အချက်ကို ပြောရရင် macOS ကို ယှဉ်ဖို့ မလွယ်သေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လည်း OS အတွင်းပိုင်းအထိ စိတ်ကြိုက် Customize လုပ်မရသေးတာက ဝမ်းနည်းစရာပါ။ Windows မှာတော့ Start Screen ဘယ်လိုထားမယ်၊ Lock Screen ဘယ်လိုလုပ်ထားမယ်ကအစ စိတ်ကြိုက်သွားပြင်နိုင်ပါတယ်။
ပျက်သွားရင် ကုန်ကျစရိတ် Windows PC တွေ ပိုနည်းတယ်
Mac ပဲ ပျက်ပျက်၊ Windows PC ပဲပျက်ပျက် Service ပြရရင် Windows သမားတွေ Mac User ထက် ပိုစိတ်ရှည်ရပါတယ်။ Brand တွေက မှိုလိုပေါက်နေတာဆိုတော့ ဝယ်ထားတဲ့ မော်ဒယ်အလိုက် သေသေချာချာ မေးမြန်း ပြင်ဆင်နိုင်မှ ဂျင်းအထည့် မခံရမှာပါ။ ဒီပြဿနာ Mac User မကြုံရပေမယ့် သူ့အစိတ်ပိုင်းတခုချင်းစီက Windows PC တွေထက် ပိုဈေးမြောက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Mac ပြင်ရတာ ကျွမ်းကျင်ဦးမှဆိုတော့ Service ခလည်း ပိုဈေးကြီးတယ်။
Keyboard က Mac ထက်ပိုကောင်းတယ်
MacBook Keyboard ဒီဇိုင်းအသစ်က Attraction ရှိတယ်၊ လက်တော့ကိုယ်ထည် ပိုပါးသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် Complain တက်ခံလိုက်ရတာက ဖုန်တောင် အဝင်မခံတော့တဲ့အထိ Shallow Layer ပါးသွားလွန်းတဲ့အချက်က စာရိုက်တာရော၊ အကြမ်းခံတဲ့အချက်တွေမှာ Butterfly Keyboard ဒီဇိုင်းက အပြစ်ပြောစရာ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး Key တခုခုပျက်သွားရင် Windows မှာလို အချပ်လိုက် လှဲချင်တိုင်း လှဲမရဘူး၊ သူ့ Logic Board နဲ့ပါသွားဆက်နေလို့ အရမ်းအန္တရာယ်များလွန်းတယ်။
It is easier to get Repaired
ဒါကြောင့်ပဲ Generation2ထပ်မိတ်ဆက်လိုက်ပေမယ့် User Confident နည်းပါးနေဆဲပါ။ Windows Keyboard နဲ့ Touchpad သုံးရတာ Mac လောက် မ Good ပေမယ့် ပြင်ရဆင်ရ ထွေထွေထူးထူး ပြဿနာ မရှိဘူး၊ ပြင်ရရင်လည်း ကုန်ကျစရိတ်လည်း ပိုနည်းတယ်။
ဘာလို့ MacBook တှဈေေးကွီးပွီး Windows Laptop ကို မယှဉျနိုငျတာလဲ?
Apple MacBook တှကေ ဈေးကွီးပွီး အရညျသှေးပိုငျး စိတျခထြားလို့ရတယျ၊ ဟိတျဟနျ အပွညျ့ရှိတယျ။ လကျတော့တလုံးမှာ ရှိသငျ့တဲ့ Standard အားလုံး ပိုငျဆိုငျနတေယျ။ နောကျပွီး macOS ဆိုတာက အရေးကွီးဆုံး အစိတျပိုငျးလို့တောငျ အမှမျးတငျခငျြ တငျထားနိုငျပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဈေးနှုနျးခငျြးတူနရေငျတောငျ စှာတေးလနျ Windows Laptop တှကေို ဘာလို့ မယှဉျနိုငျတာလဲ? ဒီလို ကောငျးကောငျးကမျးကမျး သုံးခငျြလို့ MacBook ကို ဈေးကွီးပေး ဝယျထားလိုကျတာတောငျ သူမပိုငျဆိုငျနိုငျတဲ့ Windows အားသာခကျြတှကေ ဘာတှဖွေဈနိုငျမလဲ?
Windows Laptop တှေ ပိုဈေးသကျသာတယျ
ပထမဦးဆုံး MacBook နဲ့ Windows PC စြေးနှုနျးခငျြး ကှာနတောက ကုမ်ပဏီတနျဖိုး Apple ပိုမွငျ့နလေို့ပါ ။ အခုခြိနျမှာ တဈထောငျဘီလီယံ (တဈထရီလီယံ) တနျကုမ်ပဏီ ဖွဈသှားပွီဆိုတော့ ဘယျ Apple Product မဆို ဈေးပိုတကျသှားပွီပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့မလို့ ဈေးအနညျးဆုံး Mac Mini တောငျ ဒျေါလာ ၅၀၀ လောကျရှိတယျ၊ ဒီတနျဖိုးနဲ့ ပေးရတဲ့ Mac Mini စှမျးဆောငျရညျက ဒျေါလာ ၃၀၀ တနျ Windows ကှနျပြူတာ နဲ့ အတူတူပဲမလို့ Specification တူနရေငျ ဘာလို့ Mac Mini ကို ရှေးမှာလဲ?
ဒီလိုပဲ Apple လကျတော့တှထေဲ လှမျးရှိုးကွညျ့လိုကျပါ၊ ဈေးအနညျးဆုံး MacBook Air ကို ဒျေါလာ ၁၀၀၀ စရောငျးတာမလို့ တကယျ့ဘုရားစူး Price ပါ။ ဒီလို Basic Model ကိုမှ Budget သုံးနိုငျတဲ့အဆငျ့ပဲရှိတာမလို့ MacBook Air Specification အတိုငျး Windows မှာ သှားဝယျရငျ ဒျေါလာ ၄၀၀ လောကျနဲ့ရနိုငျတယျ၊ ဒျေါလာ ၁၀၀၀ Windows PC ဆိုရငျ ဘယျလောကျစှာနမေလဲ တှေးကွညျ့လို့ရပါတယျ။
Windows PC မှာ ရှေးခယျြလို့ရတာ အမြားကွီးပဲ
လကျတော့ တလုံးအပွေးဝယျတဲ့အခါ ကိုယျသုံးခငျြတဲ့ အနထေားလိုကျ Windows မှာ ရှေးခယျြလို့ရတာ အမြားကွီးပါ။ ဂိမျးကစားဖို့လား၊ ရုံးသုံးအတှကျလား၊ ဓာတျပုံ ဗီဒီယိုတညျးဖွတျခငျြလို့လား? အိုကဗြော…အစုံရှိတယျ၊ Size စုံ၊ Brand မြိုးစုံနဲ့ ဘယျ Windows လကျတော့ကွိုကျလဲဆိုပွီး စိနျပွနေပွေေ ရှေးနိုငျတယျ။
ဒါပမေယျ့ MacBook ဝယျဖို့ ဆုံးဖွတျထားရငျတော့ ဒီတံခါးကပဲဝငျ၊ ဒီတံခါးကပဲပွနျထှကျ လို့ပဲပွောရမှာပါ။ ဘာလို့လဲ? သူ့မှာ ရှေးခယျြစရာ Air ရယျ၊ MacBook Pro ရယျ New MacBook ရယျ ဆိုပွီး သုံးမြိုးပဲရှိလို့၊ ဒါတောငျ Pro တမြိုးပဲ Editing အတှကျ Strong ဖွဈတာ၊ သူ့မှာ Dedicated GPU နဲ့ Core i9 CPU ပါလို့။
Windows PC တှေ ကွိုကျသလို Upgrade လုပျနိုငျတယျ
ဒီအခကျြကို Mac တှေ လုံးဝမလိုကျနိုငျပါဘူး၊ ဒီ CPU ဒီ RAM ဒီ SSD နဲ့ ကွောငွာထားတဲ့ မျောဒယျအတိုငျး ဝယျပွီးသှားရငျတော့ ဒီခရီး၊ ဒီမှာတငျ ဆကျမသှားတော့ဘူးလို့ မှတျလိုကျပါ။ ဘာ Upgrade မှ မလုပျနိုငျသလို မနိုငျဝနျလညျး ထမျးခိုငျးလို့မရပါဘူး။ ဒီထကျ ပိုဝမျးနညျးစရာကောငျးတာက Windows PC တှေ ကွိုကျသလို Upgrade လုပျနိုငျတဲ့အပွငျ Hackintosh ကှနျပြူတာဆိုပွီး ကိုယျ့ဘာသာ macOS တငျ Windows Hardware တှနေဲ့ တငျသုံးနိုငျပါသေးတယျ။
ကှနျပြူတာနဲ့ ဂိမျးကစားဖို့ တှေးထားရငျ MacBook ဝယျဖို့ မစဉျးစားလိုကျပါနဲ့၊ ဘာလို့လဲ? ငါ့မှာလညျး Windows လို Specs တှေ ပါတယျလေး၊ Retina Display နဲ့ မကစားခငျြဘူးလားဆိုပွီး သံယောငျနားမထောငျလိုကျပါနဲ့။ Mac တှေ ဘယျလောကျပဲ Powerful ဖွဈတယျပွောပွော သူ့ OS ဒီဇိုငျးနဲ့ Cooling Efficiency ကိုက ဂိမျးကစားဖို့အတှကျ မဟုတျပါဘူး။ နောကျပွီး 144Hz Screen ၊ Nvidia GPU နဲ့ Gaming Keyboard လို အရေးပါတဲ့ အစိတျပိုငျးတှေ ပါမလာတဲ့အတှကျ Gaming Laptop ကွီးနဲ့ အလုပျလုပျမလား၊ ဂိမျးဆော့မလား စိတျကွိုကျဆှဲနိုငျပါတယျ။
Windows Laptop တှမှော Port တှေ ပိုပါတယျ
Apple ကို Ditch King (ဖွုတျထုတျဘုရငျ) လို့ နာမညျပေးလိုကျတာ ပိုကောငျးမယျထငျပါတယျ။ MacBook Air မှာ DVD Drive စဖွုတျတယျ၊ 2016 MacBook တှကေ စပွီး USB-2.0 Port တှေ၊ 3.0 Port တှေ၊ HDMI Port တှဆေိုပွီး ရှိရှိသမြှအပေါကျတှေ အကုနျဖွုတျပဈတယျ။ ထှကျလာတယျ မကျြနှာပွောငျတိုကျပွီး C Port တခုထဲနဲ့ ၊ အဲ့တော့ Dongle သပျသပျဝယျသုံးရတယျ၊
Mac User တှကွေညျ့လိုကျ Adapter မြိုးစုံနဲ့ အလုပျကို ရှုပျနတောပဲ။ TV ၊ Projector ခြိတျဖို့ Connector သပျသပျ၊ အားသှငျးကွိုးသပျသပျနဲ့၊ သူတို့ကိုကွညျ့ရ မကျြစိ နောကျနတောဆိုတော့ တစုထဲဖွဈသှားအောငျ ThunderBolt Port ဆိုပွီး ထပျထုတျလိုကျတယျ။ ဒါလညျး ဂှပျကနြတေုနျးပဲ၊ Windows Laptop အမြားစုမှာ USB Port မြိုးစုံ၊ HDMI Port တှနေဲ့ Card Reader တောငျ အဆဈပါနသေေးတာမလို့ ဘာလာလာ Ready ပါပဲ။
Windows hardware တှကေ အမွဲလိုလို Update ဖွဈနတေယျ
အနီးစပျဆုံး MacBook Air ကို လှမျးကွညျ့လိုကျပါ။ ဒီပုံစံ၊ ဒီတိုငျးကွီးနဲ့ ဘယျတော့မှလညျး Upgrade ဖွဈမလာဘူး။ Display ကလညျး ဝှဲစှဲနပွေီ၊ Full HD Resolution လညျး မရဘူး၊ နောကျပွီး Entry Level တောငျမှ ၂ နှဈ၊ ၃ နှဈနမှေ Update လုပျပေးတာဆိုတော့ Hardware အသဈထှကျတိုငျး Specification မြိုးစုံ၊ ဒီဇိုငျးမြိုးစုံနဲ့ ပိုပို Powerful ဖွဈလာတဲ့ Windows Laptop ကို ယှဉျနိုငျဖို့ဆိုတာ
Productivity Software တှေ Windows နဲ့ ပိုအလုပျလုပျတယျ
Productivity Software ဆိုလို့ Microsoft Office ကိုပဲ ပွေးမွငျကွညျ့လိုကျပါ။ သူ့ကို Windows နဲ့ macOS နှဈမြိုးလုံးမှာ သုံးနိုငျတယျဆိုမယျ့ Feature ပိုစုံတယျ၊ Update ပိုဖွဈတယျဆိုတဲ့ အခကျြကို Windows မှာပဲ တှနေို့ငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မလို့ Mac တှထေကျ သုံးရပိုအစဉျပွသေလို Software အမြားစု Windows နဲ့သုံးရတာ ပို Stable ဖွဈပါတယျ။
Windows OS ကို ကွိုကျသလို Customize လုပျနိုငျတယျ
OS Stability နဲ့ ပို Secure ဖွဈတဲ့အခကျြကို ပွောရရငျ macOS ကို ယှဉျဖို့ မလှယျသေးပါဘူး၊ ဒါပမေယျ့လညျး OS အတှငျးပိုငျးအထိ စိတျကွိုကျ Customize လုပျမရသေးတာက ဝမျးနညျးစရာပါ။ Windows မှာတော့ Start Screen ဘယျလိုထားမယျ၊ Lock Screen ဘယျလိုလုပျထားမယျကအစ စိတျကွိုကျသှားပွငျနိုငျပါတယျ။
ပကျြသှားရငျ ကုနျကစြရိတျ Windows PC တှေ ပိုနညျးတယျ
Mac ပဲ ပကျြပကျြ၊ Windows PC ပဲပကျြပကျြ Service ပွရရငျ Windows သမားတှေ Mac User ထကျ ပိုစိတျရှညျရပါတယျ။ Brand တှကေ မှိုလိုပေါကျနတောဆိုတော့ ဝယျထားတဲ့ မျောဒယျအလိုကျ သသေခြောခြာ မေးမွနျး ပွငျဆငျနိုငျမှ ဂငျြးအထညျ့ မခံရမှာပါ။ ဒီပွဿနာ Mac User မကွုံရပမေယျ့ သူ့အစိတျပိုငျးတခုခငျြးစီက Windows PC တှထေကျ ပိုဈေးမွောကျပါတယျ။ နောကျပွီး Mac ပွငျရတာ ကြှမျးကငျြဦးမှဆိုတော့ Service ခလညျး ပိုဈေးကွီးတယျ။
Keyboard က Mac ထကျပိုကောငျးတယျ
MacBook Keyboard ဒီဇိုငျးအသဈက Attraction ရှိတယျ၊ လကျတော့ကိုယျထညျ ပိုပါးသှားတယျ၊ ဒါပမေယျ့ Complain တကျခံလိုကျရတာက ဖုနျတောငျ အဝငျမခံတော့တဲ့အထိ Shallow Layer ပါးသှားလှနျးတဲ့အခကျြက စာရိုကျတာရော၊ အကွမျးခံတဲ့အခကျြတှမှော Butterfly Keyboard ဒီဇိုငျးက အပွဈပွောစရာ ဖွဈလာခဲ့တယျ။ နောကျပွီး Key တခုခုပကျြသှားရငျ Windows မှာလို အခပျြလိုကျ လှဲခငျြတိုငျး လှဲမရဘူး၊ သူ့ Logic Board နဲ့ပါသှားဆကျနလေို့ အရမျးအန်တရာယျမြားလှနျးတယျ။
ဒါကွောငျ့ပဲ Generation2ထပျမိတျဆကျလိုကျပမေယျ့ User Confident နညျးပါးနဆေဲပါ။ Windows Keyboard နဲ့ Touchpad သုံးရတာ Mac လောကျ မ Good ပမေယျ့ ပွငျရဆငျရ ထှထှေထေူးထူး ပွဿနာ မရှိဘူး၊ ပွငျရရငျလညျး ကုနျကစြရိတျလညျး ပိုနညျးတယျ။
by Zawyè . 48 mins ago